यस्तो समय, ‘जहाँ टेस्ट ट्यूबमार्फत जन्मने मानिस बढी हुनेछन्’ – Lokpati.com
Lokpati - Best News Portal of Nepal शनिबार, मंसिर २८, २०७६
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अपराध चितवन नेपाली काँग्रेस प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड राशिफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका मृत्यु पक्राउ सरकार नेपाल प्रहरी नेकपा
यस्तो समय, ‘जहाँ टेस्ट ट्यूबमार्फत जन्मने मानिस बढी हुनेछन्’
By लाेकपाटी न्यूज	 Last updated Sep 14, 2019
सेक्स एक यस्तो विषय हो, जसमा सबैको चासो छ, तर मानिस यस विषयमा कुरा गर्न हिचकिचाउँछन्। पुरुषहरु सेक्सको बारेमा आफ्नो विचार खुलस्त रुपमा राख्न सक्छन। तर यदि महिलाहरू यस विषयमा खुलेर कुरा गर्न चाहन्छिन भने पनि उनीहरुलाई गलत दृष्टिले हेरिन्छ।
सेक्सको विषयमा महिलाहरू प्रायः लाज र सामाजिक प्रतिबन्धका कारण मौन रहन्छन्। तर प्राचीन समय शारीरिक सम्बन्धको बारेमा धेरै खुला समाज थियो। उदाहरणको रूपमा हामी केही मन्दिरहरूमा कामसुत्र सम्बन्धिका तस्वीरहरु देख्नसक्छौ। तर जब समाजको प्रगति हुँदै गयो, शारीरिक सम्बन्धतर्फ मानिसको सोच संकुचित भयो। यद्यपि, अब यौन सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन आउँदैछ। जो एक क्रान्ति हो।
स्वाभाविक रूपमा, सेक्स बच्चा जन्माउने र परिवार हुर्काउनेमा सीमित थियो। तर अहिले विज्ञानको चमत्कारले अब बच्चाहरु सेक्स विना पनि जन्माउन सकिन्छ। त्यो टेस्ट ट्यूब विधिबाट सम्भव छ। संसारको पहिलो टेस्ट ट्यूब बेबीको जन्म १९९७ मा भएको थियो। त्यसबेलादेखि करीब ८० लाख बच्चाहरू यस प्रविधि मार्फत विश्वभर जन्म लिएका छन्।
अनुसन्धानकर्ताहरु भविष्यमा यसरी जन्मेका बच्चाहरूको संख्यामा धेरै हुनेछ भन्ने विषयमा विश्वास गर्छन्। लेखक हेनरी टी. ग्रेले भन्छन, ‘आउँदो समयमा २० देखि ४० वर्षबीचका स्वस्थ जोडीहरूले प्रयोगशालामा गर्भधारण गर्न मन पराउनेछन्। उनीहरूले बच्चा जन्माउन यौन सम्बन्ध राख्ने छैनन्। यौन सम्बन्ध उनीहरुका लागि शारीरिक आवश्यकता र मनोरञ्जनका लागि मात्र हुनेछ।’
यदि बच्चाहरू सेक्स बिना जन्माउन सकिन्छ भने सेक्सको आवश्यकता किन र के हो? सेक्सको काम भनेको पुरुष र महिलाको शारीरिक आवश्यकता पूरा गर्नु र उनीहरूको बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नु हो। तर यहाँ पनि धर्म ठूलो बाधा हो। प्रत्येक धर्मले सेक्सको बारेमा धेरै प्रतिबन्धहरु र नियमहरु बनाएको छ। इसाई धर्ममा पुरुष र महिलाले केवल बच्चा जन्माउन यौन सम्बन्ध राख्नु पर्छ भनिएको छ।
यदि सेक्स शारीरिक सुख र खुशीको लागी मात्र हो भने यो अनैतिक छ। यद्यपि, पुरानो पुस्तक सोलोमन सॉन्गमा यौन सम्बन्धलाई सबैभन्दा उत्तम मानिएको छ। साथै, यौन सम्बन्ध पति र पत्नी बीच मात्र नभई दुई प्रेमीहरू बीचको सम्बन्धका रुपमा पनि वर्णन गरिएको छ।
ग्रीसका महान दार्शनिक अरस्तु यस विषयमा प्रकास पार्दै भन्छन, ‘प्रेम कामुक चाहनाहरूको अन्त्य हो। यदि त्यहाँ दुई व्यक्तिको बीचमा प्रेम छ भने, तब तिनीहरूबीच शारीरिक सम्बन्धमा हुन पुग्छ।’ उनीहरुका अनुसार सेक्स भनेको साधारण काम होइन। बरु, कसैलाई प्रेम गर्न र कसैको प्रेम पाउनको लागि यो महत्त्वपूर्ण र सम्मानजनक कार्य हो।
जबकि अमेरिकी समाजशास्त्री डेभिड हलपेरिनका अनुसार सेक्स केवल सेक्सको लागि हो। त्यहाँ आवश्यकता पूरा गर्ने वा सम्बन्ध बलियो पार्ने कुनै चीज छैन। यस्तो हुन सक्छ, जब एक व्यक्तिले सेक्स शुरू गरेको छ, तब उसले आफ्नो शारीरिक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने माध्यम बनाइरहेको छ। तर जब परिवार बनाउन थाल्छ, यो सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने माध्यमको रूपमा मानिन्छ सक्छ।
तर आज समाज पूर्ण रूपले परिवर्तन भएको छ। आज सेक्स पनि पैसा तिरेर गरिन्छ। धेरै व्यक्तिले पेशेवर जीवनमा अगाडि बढ्न यौन हतियार बनाउँछन्। यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि एक व्यक्तिको शारीरिक आवश्यकता पूरा हुन्छ। तर, त्यहाँ सम्बन्ध बलियो बनाउन वा भावनात्मक एक अर्का संग जोडिने रूपमा केहि चीज छैन।
यस्तो अवस्थामा फेरि सेक्सको अर्थ के हो ? यसको मतलब सेक्स केवल सेक्सको लागि गरिनु पर्छ।
आज, परिवर्तनशील समयसँगै मानीसका सम्बन्धहरू पनि परिवर्तन हुँदैछन्। बरु, यौन र सम्बन्धको बारेमा सोच्ने सम्बन्धमा मानिसहरुको व्यवहार पनि परिवर्तन हुँदैछ। २०१५ मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्यान डिएगो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जीन एम टुभिंगले एक शोध पत्रमा भनेका थिए, १९७० देखी २०१० सम्म अमेरिकामा ठूलो संख्यामा लोग्नेमान्छे बिना विवाह सम्बन्धी यौन सम्बन्धलाई स्वीकार्न थालेका छन्।
नयाँ पुस्ताले यौनिकतालाई समाजको प्रतिबन्धमा बाँध्नु हुँदैन भन्ने विश्वास गर्दछ। अनुसन्धानकार्ता टुभिंगका अनुसार यौन नैतिकता समयनिष्ठ हुँदैन। परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, र जारी गर्न जाँदैछन्। अब यी परिवर्तनहरू यती चाँडो भइरहेको छ कि हुनसक्छ हामी यी परिवर्तनहरू स्वीकार गर्न पनि तयार छैनौं।
शारीरिक सम्बन्ध पुरुष र महिला बीच मात्र बनेको छैन। बरु, धेरै देशहरूले समलिंगी र समलिंगी सम्बन्धलाई मान्यता दिन थालेका छन्। यो मानसिक वा शारीरिक अराजकता पनि होइन। यद्यपि धार्मिक र सामाजिक दुबैलाई यो अनैतिक व्यवहारको रूपमा लिइन्छ।
धर्मले समलिंगी जनावरहरूले आपसमा सम्बन्ध बनाउँदैनन् भन्छ। किनभने तिनीहरू जान्दछन् कि यो अनैतिक हो। जबकि विज्ञानले भनेको छ कि त्यहाँ ५०० प्रजातिहरू छन् जुन बीच समलैंगिकता रहेको छ, जसमा जापानी मकाक, फल फ्लाई, फ्लाइ फ्लाइज, अल्बट्रोस चरा र बोतलको नाक डल्फिन समावेश छ। तर हामी उनीहरूलाई लेसबियन, समलिंगी वा हेटेरोसेक्सुअल जस्ता नामहरू दिदैनौं।
आखिर, ती सबैको बिचमा कसले रेखा बनायो? सम्भवतः जसले यौन सम्बन्धलाई केवल बच्चाहरू जन्माउनले विषयका रुपमा लिन्छन्। होइन भने यौन सम्बन्ध किन ? यदि प्रश्न हटायो भने, शायद मानिसहरूले यसको राम्रो अर्थ बुझ्न सक्दछन्। यौन चाहना एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो।
यौन सम्बन्ध प्रति व्यक्तिको दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै जाँदा, मानिसहरूले समलिंगी र समलिंगी सम्बन्धहरू पनि स्वीकार्न थालेका छन्। १४१ देशहरूमा हालसालै गरिएको अनुसन्धानले १९८१ देखि २०१४ सम्ममा एलजीबीटी समुदायको स्वीकृति दर ५७ प्रतिशतले बढेको छ। यसमा मिडियाबाट सकारात्मक सहयोग, चिकित्सा सहयोग र मनोवैज्ञानिक संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
यस बाहेक, आज अश्‍लील हेर्ने चलन बढेको छ, यसबाट स्पष्ट हुन्छ मानिसहरूमा यौनको भोक कति छ। तपाईले पोर्न हेरेर केहि पनि प्राप्त गर्न सके पनि वा नसकेपनि यौन चाहना केही हदसम्म शान्त हुन्छ।
सेक्स पनि परिवर्तन हुनेछ
विज्ञहरू समेत भन्छन्, भविष्यमा, सेक्स अधिक डिजिटल र सिंथेटिक हुनेछ। यो मात्र होईन, भविष्यमा यौनका धेरै र नयाँ तरिकाहरू बाहिर आउन सक्छन्।
अहिलेसम्म, उही व्यक्तिले टेस्ट ट्यूब र IVF अपनाइरहेका छन्, जो प्राकृतिक तरिकाले बच्चा जन्माउँन असफल छन्। यो सम्भव छ कि आउँदो समयमा सबैले यस प्रविधि प्रयोग गर्न शुरू गर्नुपर्दछ।
बच्चा जन्माउन नर र मादा अण्डाको मिलन आवश्यक छ। तर समलिंगी र लेस्बियनको सन्दर्भमा यो सम्भव छैन। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूले बच्चाको इच्छा पूरा गर्न यो प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय यस्तो उदाहरणहरु धेरै पाईन्छन्।
प्रतिबद्धता र विवाह सम्बन्धको सम्बन्धमा पनि केही नयाँ तरिका बाहिर आउन सक्छ। रोग नियन्त्रण पछि, मानिसको उमेर पनि बढेको छ। १९६० देखि २०१७ सम्ममा, मानसको औसत उमेर करीव २० बर्ष बढेको छ। एक अनुमानका अनुसार २०४० सम्ममा अझ ४ बर्षको बृद्धि हुनेछ। अमेरिकी जीव वैज्ञानिक र भविष्यशास्त्री स्टीभन ओस्ताडका अनुसार आउँदो समयमा मानिस १५० वर्षसम्म बाँच्न सक्छ। यस्तो लामो जीवनमा, केवल एक यौन साथीसँग बस्न गाह्रो हुन्छ।
त्यसैले मानिसहरुले समय समयमा आफ्नो यौन साथीलाई बदल्नेछन्। र यो सुरु भइसकेको छ। यसको उदाहरण ठूला शहरहरूमा पाइन्छन्। सम्बन्धविच्छेदको घटना बढ्दैछन्।
२०१३ को सर्वेक्षण अनुसार अमेरिकाका हरेक १० मध्ये चौथो जोडीको दोस्रो या तेस्रो विवाह हुन्छ। आउँदै गरेको समयमा, प्रतिबद्धता र विवाहित जीवनको बारेमा धेरै नयाँ विचारहरू पनि प्रकट गर्न सकिन्छ। प्रकृति अनुसार मानिस परिवर्तन हुँदैछन् र परिवर्तन जारी रहनेछ। अब हामीले आफ्नो सोच बदल्नु पर्छ।
हामीले यौन सम्बन्धि हाम्रो विचार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। त्यो दिन टाढा छैन जब सारा संसारले सेक्स रमाइलो र मनोरन्जनको माध्यम मान्दछ। बच्चा जन्माउने माध्यम होइन। -बीबीसी
७० हजारलाई डेंगु रोग, अस्पतालमै पुगेकै बिरामी ७ हजार
बाग्लुङ जिल्ला : एक संक्षिप्त परिचय
राजनीतिका ४८ वर्ष : ३३ वर्षदेखि प्रचण्डको अविछिन्न नेतृत्व
रारातालको जिल्ला : मुगुको संक्षिप्त परिचय
निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल किन ?
अबदेखि तीने महिने तालिम नलिई बिहे गर्न नपाइने
प्रहरीकै परीक्षामा २२ नक्कली परीक्षार्थी
विप्लव नेकपाका तीन नेता पक्राउ
सबै पूर्वाधार बनाऔं, अनि पर्यटक बोलाउँ भन्नु बुद्धिमानी…
याैन सम्पर्कपछि गर्नै नहुने सात काम